Telegrama DVI & VGA
USB-C Cable & Adapt
Fiampangana tariby data
Maninona no misafidy Agalink
Ve ny telegrama RoHS na hahatratra Compliance?
Eny, ny entana avy any Umateck dia mifanaraka tsara amin'ny RoHS (Fampihenana ny nampidi-doza akora) ary tonga (Registration, Evaluation, Ny fanomezam-pahefana, sy ny fameperana akora simika), isika dia afaka nanome fitsapana tatitra ho an'ny rehetra ny vokatra ara-nofo, izay ampiasaina. Isika koa dia afaka manome fanambarana mba hahazoana antoka ny vokatra azonao avy aminay, dia efa RoHS na hahatratra fanajana. Contact us izao mba hahazo fanambarana na fitsapana tatitra.
Inona no haingana dia afaka mahazo ny tolotra avy aminao?
Ny nanontany azo valiana ao anatin'ny 2 ora ny fotoana any am-piasana, raha toa isika eny adidy na amin'ny fety, isika dia afaka hamaly anao ao anatin'ny 24 ora. Fahombiazana no laharam-pahamehana.
Afaka manome FREE santionany noho ny fanamarinana kalitao?
Antoka, isika, dia afaka manome santionany haingana ho an'ny mpanjifa ny fanamarinana ny kalitao, santionany dia tena maimaim-poana, fa ny fandefasana vola tokony irery, izay te-ho lehibe raha afaka manome ny mitondra kaonty.
Ny ara-dalàna dia 1000 MOQ pcs isaky ny zavatra, na tanteraka manta 3000 metatra isan-tariby famaritana ao amin 'ny loko. fa fiaraha-miasa voalohany, isika dia manoatra noho ny faly hanaiky ny fitsarana mba tahaka 1oo pcs na 200 pcs. ary raha manana boloky hazo, isika koa dia afaka mivarotra kely dia be ho anareo, pls andefaso olona antsika mba hilaza aminay ny fepetra antsipirihany.
Inona no azonao an-tsambo haingana ny telegrama raha levitra izao?
Izany dia miankina amin'ny fepetra arahana, habetsahana sy ny package..etc, ny fe-potoana ara-dalàna dia 3-4 herinandro, raha toa ka mba kely be sy manana fanazavana amin'ny tahiry, isika dia afaka an-tsambo izany ny amin'ny 1-2 herinandro. Faly izahay hanao laharam-pahamehana ho an'ny maika takina, azafady fotsiny Lazao anay fa lasibatra.
Afaka manolotra vola mahomby sambo vahaolana ho antsika?
Eny, manana mpiara-miasa ao amin'ny Ranomasina stratejika, rivotra sy haneho sambo, ny vidiny azontsika atolotra no tena fifaninanana.
Ahoana no mandoa, inona no teny fandoavam-bola?
Ny fandoavam-bola ara-dalàna teny dia 30% petra-bola, ary ny fifandanjana manohitra B / L, dia manolotra voninahitra misokatra toy ny OA30 / 45/60 andro ho an'ny mpanjifa sy ny niara-niasa tsara mba tanteraka vola ambony 30.000 USD. T / T, L / C, Paypal, Western Union ... sns rehetra misy.
Afaka namboarina vokatra ho antsika?
Antoka, dia mifantoka amin'ny OEM Premium telegrama ho an'ny marika tsara, na modely, nampirina entana na namboarina lavany, loko, isika manao ny tena vokatra toy izay ny tsi, fotsiny hifandray aminay ny namboarina telegrama amin'ny marika.
Mitohy ny Content eto
Adiresy: Room 907, South Tower, 288 Xilu Road, Zhenhai, Ningbo, China. 315201
© Copyright 2012-2019 Agalink.com | Zo rehetra voatokana | Powered by Ningbo Farsince Electronic Co., Limited